I-China ekhethekileyo i-240ml I-Glass Diffuser Bottle yebhotile kunye nomzi mveliso weCork Stopper kunye nabaxhasi | IHoyer
Ibhotile eneGlasi engu-240ml ecacileyo yeGlasi enguMdaka ngeCork Stopper
Umgangatho ophezulu, ocacileyo, osezantsi osindayo, iglasi ecocekileyo.
Inkangeleko enomtsalane: Imilo yefashoni, ehlala ithandwa ekhaya, kulula ukuyisebenzisa kwaye upakisha ngokukhuselekileyo.
Unokufuna nekhokhoyi ukuze litshatise nale bhotile. I-cork yenziwa ngezinto eziphezulu zepolymer, idlala a
Indima njengeyona ndlela esemgangathweni, ehambelanayo kunye neyeyona ndlela inokwenzeka yokuthintela ulwelo lwangaphakathi luphume, njengabanqandi
kwibhotile ye wayini ebomvu. Ukususa isiciko kukuvumela ukuba utofe ioyile eyimfuneko ngqo kwibhotile yeglasi.
Umthamo: I-240ml / 8.2 oz
Ukuphakama: 135mm / 5.3 intshi
Ububanzi: I-70mm / 2.7 intshi
Ungayidlala ngokokuthanda kwakho: ungayitshintsha ivumba elinye emva kokuba lisetyenzisiwe, okanye usebenzise izixhobo ezahlukeneyo njengeziti zeengcongolo, iintyatyambo, ilitye le-ceramic kunye neseti.
Qaphela: izincedisi ezinjengee-corks kunye neenkuni azifakwanga, ukuba ziyimfuneko, ungazifumana kwiwebhusayithi yethu okanye uthumele umbuzo kuthi ngqo. Isithinteli se-cork sisitywina somgangatho wesizwe, ukuba usebenzisa isithinteli se-cork kwaye siziva siqinile, oku kuchanekile kuba kufuneka kuqinwe ngokwaneleyo ukunqanda ukuvuza. Enkosi kakhulu ngokuqonda kwakho.
Ubungakanani Umthamo: 240 ml Ubunzima: 300 g Umphakamo: 135 mm ububanzi: 70 mm Umthamo: I-8.2oz Weight: 0.66 iipawundi Ukuphakama: Ububanzi be-intshi ezi-5.3: ii-intshi ezi-2,7
Ukulungiswa kweposi Ukupeyinta, i-decal, isilikhi yesilika, ukupeyinta kweprinta, ukufrasha, ukubeka igolide, ukubeka isilivere njl njl.
Umzekelo a. iisampulu kwisitokhwe: QTY: 1-5-5csIindleko: zinikezwe ngokukhululekileyoIzinto zokuhamba: qokelelaIxesha: Iintsuku ezi-3-5 b. iisampuli ezenzelwe wena: QTY: ngokwemfuno yakho Ixabiso: ngokwendlela ethile yoyilo kunye nemvelisoIzinto zokuhamba: qokelela Ixesha: ngokwendlela ethile
Edlulileyo: Ibhotile yeGlass Diffuser yombala odumileyo
Okulandelayo: Ibhotile yeglasi engu-100ml ecacileyo yeGlass Diffuser